Doorashada dalka Afghanistaan - BBC News Somali
Doorashada dalka Afghanistaan
Image caption Dadka reer Afghanistan oo codkooda dhiibanaya
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegaya in ku dhowaad 50 qof ay ku dhintay weeraro ay qaadeen kooxaha islaamiyiinta ah intii ay socotay codeynta doorashada madaxweynaha.
Guddiga doorashooyiinka ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in in kabadan todobo milyan oo qof ay codkooda dhiibteen, dadka soo baxayna ay gaarayaan boqolkiiba 60. In kabadan kala bar dadkaasi waxay ahaayeen dumar sida guddiga uu sheegay.
Dadka reer Afghanistan ayaa kala dooranayo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Abdullah Abdullah iyo Ashraf Ghani, oo ahaan jiray wasiirka dhaqaalaha. Waana doorasho wareegii labaad ah.
Labada musharax ee tartamaya waxay ballan qaadeen, inay xoojin doonaan xiriirka reer galbeedka iyo inay la dagaallami doonaan musuqmaasuqa. Labadooduba midkii guuleysta ayaa bedeli doono Madaxweyne Xamid Karzay.
Mr Karzay oo aanan isu soo sharixin doorashadan maadaama uu dhaamaaday xiligiisii, ayaa Waxa uu soo dhaweeyay sida wanaagsan ee ay u socoto doorashada wuxuuna sheegay in doorashadan ay ka turjumeyso inuu dalka Afghanistan hormaray.
Hasayeshe Hamid Karzai waxaa la filaayaa inuu galangal ku yeesho dowladda kadib marka uu wareejiyo awoodda.
Mr Cabdullah Cabdallah oo ka mid ah labada musharax ee u tartamaya xilka ayaa weriyayaasha u sheegay inuu xushmeyn doono go'aanka dadka reer Afghanistan.
Dhinaca kale Mr Asharaf Ghani oo asna ah musharaxa la tartamaya Cabdallah ayaa warbaahinta u sheegay inay sugayaanku dhawaaqida natiijada codeynta.
Hadaba iyadoo inta badan ciidamada shisheeye ay isu diyaarinayaan in ay ka soo baxaan dalka Afghanistan daba yaaqada sannadkan, ayaa qofka noqon doono madaxweynaha cusub ee dalkaas waxa uu dhaxli doonaa waddan ururka taaliban uu weli firficoon yahay, dhaqaalaha uu liito, musuqmaasuqa uu yahay mid aad u sareeya iyo waddan sharciga iyo kala dambeynta aanay ka jirin meelo badan. Ururka taalibaan ayaa ku gacanseeray doorashada waxay weerareen xarumaha codbixinta.